RW Khayre oo sheegay sababta uu Madaxweyne Farmaajo maanta kalfadhigii Aqalka Sare u furi waayey – Radio Daljir
RW Khayre oo sheegay sababta uu Madaxweyne Farmaajo maanta kalfadhigii Aqalka Sare u furi waayey
Abriil 1, 2019 12:46 g 0
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali kheyre ayaa Maanta ka qeybgalay furitaanka Kalfadhiga 5aad ee Aqalka Sare, isaga oo shaaciyey sababta uu uga baaqday Madaxweyne Farmaajo.
Waxa uu sheegay Ra’iisul Wasaare Kheyre in Madaxweyne Farmaajo uu isaga u soo wakiishay ka qeybgalka kulanka,isla markaana uu khudbad ka jeediyey furitaanka Maanta ee Kal-fadhiga 5aad.
Sababaha uu kulanka uga baaqday ayuu ku sheegay sababo amni oo jira, balse Ra’iisul Wasaare Kheyre uusan sii faahfaahin.
inta uusan furmin kalfadhiga 5aad ee Aqalka Sare ayaa waxaa jiray jahwareer ka dhashay cida fureysa kalfadhiga, iyada oo guddoonka ay diidanaayeen in uu Ra’iisul Wasaaraha furo wallow markii dambe xal laga gaaray.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi ayaa tira ka dhowr jeer ka baaqday furitaanka kal-fadhiyada Golaha Aqalka Sare,waxaana xusid mudan in Xildhibaanada labada Aqal aysan xilligaan wax wadashaqeyn ah ka dhaxeyn.
Maamulka degmadda Boosaaso oo gubay maanta Bacaha madow oo PL laga mamnuucay (dhegayso)
Hay’addaha Samafalka oo digniin culus loo diray (dhegayso)